Wednesday July 27, 2016 - 12:45:28 in Wararka by Super Admin
Sheekh Saalax Badbaado ayaa ka Towbad keenay la shaqeynta DF-ka sanaddii 2010
Allaah ayaa ka soo bad-baadiyey la shaqeynta maamulladii kala duwanaa ee shisheeyuhu soo dhisay, ka dibna tusay wadada Jihaadka iyo Istish-haadka illaa ugu dambeyntii uu noloshiisa ku soo gabagabeeyey halkaasi.
Wuxuu ahaa Xildhibaan ka tirsan golaha Baarlamaanka dowladihii kala duwanaa ee soo maray Soomaaliya sanadihii 2000 ilaa 2010-ki, isagoona lasoo shaqeeyay xukuumadihii TNG,Dowladdii Federaalka C/llaahi Yuusuf iyo xukuumaddii KMG-ka ee Shariif Sheekh Axmed.
10-kii Febraayo ee sanadkii 2010 ayuu ka towbadkeenay falkii uu ku jiray xilligaas oo uu meel fagaare ah ka cadeeyey in uu Allaah u towbadkeenay uuna ku jiray fal gaalnimo ah.
Xilligaas wixii ka dambeeyey Saalax waxaa lagusoo dhaweeyey wilaayaatka Islaamiga, Waxaana gacmaha u furay Xarakada Al Shabaab, Isagoona Nasiib u yeeshay in uu isaga kala gudbno wilaayaatka Islaamiga iyo furimaha dagaalka, kana qeybgalo dowraadka, Xalaqaadka iyo kulamada wadatashiga ah ilaa ugu dambeyntii uu noqday nin fahmay sidoo kalena bartay macaanida diinta Islaamka.
Saalax Badbaado wuxuu ahaa Nin mowqif adag leh oo aan qarsan waxa uu aaminsanyahay, wuxuu sheegi jiray in dalku gumeysi kujiro islamarkaana uusan jeclayn nolosha inta Ciidanka Itoobiya iyo kuwa Uganda ay Soomaaliya maamulayaan.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Sheekh Saalax Badbaado MP3
Mas'uuliyiin iyo saraakiil ku dhintay Weerarkii deegaanka Goof guduud Buureey.